स्टोर प्रश्न र उत्तर | बेर आश्चर्यजनक
बेर आश्चर्यजनक स्टोर प्रश्नोत्तर
प्लम अमेजिंग स्टोरले कस्तो प्रकारको सुरक्षा प्रयोग गर्दछ?
उत्तर: हामी हाम्रो साइटमा कुनै क्रेडिट कार्ड जानकारी राख्दैनौं। सबै लेनदेनहरू सबै तपाईंको ब्राउजर र भुक्तानी प्लेटफर्मको सर्भरहरू (स्ट्रिप, पेपैल, आदि) को बीच प्रत्यक्ष रूपमा ह्यान्डल गरिन्छ जुन तपाईंले छनौट गर्नुभयो। प्लम आश्चर्यजनक तपाईंको जानकारी कहिल्यै देख्दैन वा यसलाई कुनै पनि हिसाबले बचत गर्दैन। भुक्तानी प्रदायकले हामीलाई सूचित गर्दछ र हामी तपाईंको अर्डर पठाउछौं।
हाम्रो सम्पूर्ण साइट स्टोर र प्रत्येक पृष्ठ मा https प्रयोग गर्दछ। साइटले SSL (सुरक्षित सॉकेट लेयर) प्रयोग गर्दछ जुन वेब सर्भर र तपाइँको ब्राउजर बीचमा ईन्क्रिप्टेड लिंक स्थापना गर्न मानक सुरक्षा प्रविधि हो। यो लिंकले सुनिश्चित गर्दछ कि वेब सर्भर र ब्राउजरहरू बीच पार गरिएको सबै डाटा निजी र अभिन्न रहन्छ। एसएसएल एक उद्योग मानक हो र लाखौं वेबसाइटहरु द्वारा आफ्नो ग्राहकहरु संग आफ्नो अनलाइन लेनदेन को संरक्षण मा प्रयोग गरीन्छ।
SSL कनेक्शन बनाउन सक्षम हुन वेब सर्वरलाई SSL प्रमाणपत्र आवश्यक पर्दछ। तपाईं माथिको युआरएल ठेगाना बारमा लक देख्न सक्नुहुन्छ। लकमा क्लिक गर्दा प्लम आश्चर्यजनक वेबसाइटको लागि सुरक्षित प्रमाणपत्र प्रदर्शन गर्दछ। सबै भुक्तानी विधिहरू सुरक्षित र सिधा भुक्तानी प्रोसेसरहरूमा जडान हुन्छ।
प्लम अमेजिंगमा के भुक्तानी विकल्पहरू छन्?
उत्तर: स्ट्रिप, अमेजन, पेपैल र AliPay। यिनीहरूले क्रेडिट कार्डको धेरै प्रकारका समर्थन गर्दछ, र धेरै सुरक्षित छन्। यदि तपाईं बेर आश्चर्यजनक स्टोर केही अन्य भुक्तानी प्रकारहरू थप्न, कृपया हामीलाई थाहा दिनुहोस्।
पट्टी के हो?
उत्तर: धारी अनलाइन र मोबाइल अनुप्रयोगहरूमा भुक्तानी स्वीकार गर्न सजिलो तरीका हो। यसले विश्वव्यापी रूपमा क्रेडिट कार्डहरूको सबैभन्दा ठूलो संख्यालाई समर्थन गर्दछ। प्राय भुक्तानी प्रोसेसरहरू जस्तै, स्ट्रिपलाई केहि व्यक्तिगत जानकारी चाहिन्छ जस्तै नाम, ठेगाना, आदि तपाईंको सुरक्षाको लागि क्रेडिट कार्डको प्रयोग मान्य गर्न।
जब तपाइँ खरीद गर्नुहुन्छ तपाइँको ब्राउजरबाट स्ट्रिप्स सर्भरको साथ सिधा अन्तरक्रिया गर्नुहोस् अत्यन्त कडा ईन्क्रिप्सन दुबै तरिकाहरू प्रयोग गरेर। प्लम आश्चर्यजनक लेनदेन वा क्रेडिट कार्ड जानकारी कहिले देख्दैन।
अमेजन केही देशहरूमा उपलब्ध छ।
यदि तपाईं यसलाई प्रयोग गर्न प्रयास गर्नुहुन्छ र फेला पछाडि कार्टले अर्को भुक्तानी विकल्पहरू जस्तै स्ट्राइपमा स्वीच गर्न अनुमति दिँदैन, तब प्लम अमेजिंग साइटबाट लग आउट गर्नुहोस् र फेरि लग इन गर्नुहोस्। अब तपाईं अर्को भुक्तान प्रणाली प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
यदि तपाइँसँग कुनै समस्या छ भने हामीलाई थाहा दिनुहोस्।
एप्पल भुक्तानी भनेको के हो? (हाल उपलब्ध छैन)
उत्तर: एप्पल भुक्तान र यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने भनेर यस लि link्कमा वर्णन गरिएको छ।
पेपाल के हो?
उत्तर: PayPal एक अनलाइन भुक्तानी गर्न अर्को तरीका हो। अधिक भुक्तान प्रोसेसर जस्तै PayPal लाई केहि व्यक्तिको जानकारी चाहिन्छ जस्तै नाम, ठेगाना, आदि तपाईको सुरक्षाको लागि क्रेडिट कार्डको प्रयोग मान्य गर्न।
जब तपाइँ खरीद गर्नुहुन्छ तपाइँको ब्राउजरबाट PayPals सर्भर संग सिधा अन्तर्क्रिया गर्नुहोस् एकदम कडा ईन्क्रिप्शन दुबै तरिकाहरू प्रयोग गरेर। प्लम आश्चर्यजनक लेनदेन वा क्रेडिट कार्ड जानकारी कहिले देख्दैन।
PayPal एक विकल्पको रूपमा देख्नुहुन्न? त्यसो भए दाहिने तिरको कार्टमा देशहरूको ड्रप डाउन मेनू हुन्छ, देशलाई संयुक्त राज्यमा स्विच गर्नुहोस् र PayPal विकल्प त्यहाँ छनौट र प्रयोगको लागि हुनेछ।
मँ स्टोर र बिक्री को बारे मा कसरी प्रश्न सोध्छु?
उत्तर: यो लिंक ट्याप गरेर हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
तपाईंलाई मेरो नाम, ईमेल आदि किन आवश्यक छ?
उत्तर: Reasons कारणहरू।
१. PayPal वा Stripe प्रयोग गर्दा तपाईको क्रेडिट कार्ड प्रमाणित र चार्ज गर्न।
२. तपाईंको ईमेलमा आधारित तपाईंको सफ्टवेयरको लागि इजाजतपत्र कुञ्जी उत्पन्न गर्न।
Last अन्तमा, खाता सिर्जना गर्न ताकि तपाईले हामीबाट पहिले नै खरिद गरेको तपाईको रसिद र इजाजतपत्र कुञ्जीहरू पुन: प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ यदि भविष्यमा तपाईले तिनीहरूलाई हराउनु भयो भने।
तपाईंसँग मात्रा वा शैक्षिक छुट छ?
उत्तर: अतिरिक्त छुटको लागि परिमाणमा खरीद गर्नुहोस्। उपहार, साना व्यवसाय, स्कूल वा कर्पोरेशनको लागि प्रतिलिपिहरूको संख्या बढाउनुहोस् कम मूल्य प्राप्त गर्न। प्लम आश्चर्यजनक स्टोरले स्वचालित रूपमा मात्रालाई खातामा लिन्छ र छुट रकम देखाउँदछ। छूट तल देखाइएको छ:
२+ प्रतिहरू १०% छुटमा
२०+ छुटको लागि ++
यदि म अघिल्लो मालिक हुँ र नयाँ ईमेल ठेगाना छ भने म कसरी खरीद गर्ने?
उत्तर: तपाईंको पुरानो खाता बिर्सनुहोस् र नयाँ खाता सिर्जना गर्न केवल तपाईंको ईमेल प्रयोग गर्नुहोस्। हामी सुरक्षाको कारण पुरानो अपडेट गर्न सक्दैनौं।
यदि मैले 'ई-मेल पहिले नै अवस्थित छ' भन्ने सन्देश खरीद गर्न को लाग्यो भने म के गर्ने?
उत्तर: प्रत्येक पृष्ठको शीर्षमा मेनूमा रहेको खाता आईटममा जानुहोस्। वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। त्यसो भए लग इन गर्नुहोस् यदि तपाईंलाई आफ्नो पासवर्ड थाहा छ। यदि तपाईंलाई आफ्नो पासवर्ड थाहा छैन भने यसलाई ईमेल गर्न 'आफ्नो पासवर्ड हरायो' मा क्लिक गर्नुहोस्।
तपाईंलाई मेरो नाम र ईमेल किन चाहिन्छ?
उत्तर: हामी त्यसलाई लाइसेन्स उत्पन्न गर्नका लागि प्रयोग गर्दछौं र तपाईंलाई ईमेल गर्न पनि। सबैजनालाई आफ्नो विशेष व्यक्तिको इजाजतपत्र कुञ्जी त्यो विशेष अनुप्रयोगको लागि प्राप्त हुन्छ।
हामी तपाइँको नाम, ईमेल र तपाइँले के खरीद गर्नुभयो राख्छौं। पछि तपाईंलाई त्यो जानकारी फेरि आवश्यक पर्दछ (नयाँ कम्प्युटरको कारण, हार्ड ड्राइभ विफलता, चोरी, आदि) तब तपाईंसँग रसिदहरू र इजाजतपत्र कुञ्जीहरू रिसेन्ट हुन सक्छ। त्यो जानकारीको साथ तपाईं हाम्रो अनुप्रयोगहरू जगेडा गर्न सक्नुहुनेछ र तुरुन्तै चालु गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईंको कम्पनीले मेरो व्यक्तिगत जानकारी र गोपनीयता कसरी प्रयोग गर्दछ?
उत्तर: हामी कहिले पनि बिक्री गर्दैनौं वा कुनै पनि व्यक्तिगत जानकारी दिदैनौं। हामी पनि वित्तीय लेनदेन वा क्रेडिट कार्ड देख्न छैन। ती सबै जानकारी तपाईको बीचमा छ, तपाईको ब्राउजर र पेपल वा स्ट्रिप्स सर्भरहरू। हामीले चाहेको भए पनि त्यो जानकारी भण्डार गर्न सक्ने कुनै तरिका छैन।
यदि तपाईं हाम्रो न्यूजलेटर प्राप्त गर्न अप्ट इन गर्नुभयो भने तपाईं प्रत्येक केही बर्षमा एक प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। पछिल्लो न्यूजलेटर २०१२ मा फिर्ता पठाइएको थियो। हामीसँग मात्र समय र महत्त्वपूर्ण समाचारहरू हुँदा लेख्ने तर्फ झुकाव छ।
म मेरो आईप्याडमा अर्डर कसरी पाउन सक्दछु आईफोनमा यसलाई प्रयोग गर्नका लागि?
उत्तर: सरल, उही खाता प्रयोग गर्नुहोस् जुन तपाईंले यसलाई आइट्युनमा खरीद गर्नुभयो र सफ्टवेयरलाई आईफोनमा पुन: डाउनलोड गर्नुहोस्। एप्पलले तपाईलाई तपाईको स्वामित्वको केहिलाई पुन: डाउनलोड गर्न चार्ज गर्दैन। हाम्रो सबै अनुप्रयोगहरू सार्वभौमिक हुन् जसको अर्थ तिनीहरू आईफोन र आईप्याडमा काम गर्दछन्। एन्ड्रोइडमा खरीद गरिएका एप्सले विभिन्न एन्ड्रोइड फोनहरू र ट्याब्लेटहरूमा पनि काम गर्दछ।
यदि मैले तपाईंको अनुप्रयोग मेटाएँ वा नयाँ फोन पायो भने म कसरी फेरि अनुप्रयोग प्राप्त गर्न सक्छु?
उत्तर: पुन: डाउनलोड गर्नुहोस् उही आईडी वा ईमेल प्रयोग गरेर जुन तपाईंले मूल रूपमा अनुप्रयोग खरीद गर्नुभयो। लि on्कमा ट्याप गर्नुहोस् तपाईंले किनेको अनुप्रयोग पुन: डाउनलोड गर्ने तरिका जान्नको लागि एप्पल आईट्यून्स अनुप्रयोग स्टोर वा बाट गुगल प्ले स्टोर। यदि तपाईं आश्चर्यचकित हुनुभयो कि यदि तपाईंले अनुप्रयोग खरीद गर्नुभयो भने तपाईं आफ्नो रसीदहरू एप्पल अनुप्रयोग स्टोर वा गुगल प्लेमा जाँच गर्न सक्नुहुनेछ।
मैले तपाईंको अनुप्रयोग खरीद गरें। म कसरी रसिद प्राप्त गर्छु, चार्ज जाँच गर्नुहोस्, बिक्री प्रश्नहरू सोध्नुहोस्?
उत्तर: एप्पल अनुप्रयोग स्टोर वा गुगल प्ले सम्पर्क गर्नुहोस्, जहाँबाट तपाईं किन्नुभयो। हामी बिक्रीमा मद्दत गर्न सक्दैनौं तर हामी हाम्रो अनुप्रयोगहरूको लागि टेक सहायताका साथ मद्दत गर्न सक्दछौं.
यदि मैले भर्खरै एन्ड्रोइडबाट आईफोन वा आईफोनमा एन्ड्रोइडमा स्विच गरें भने म कसरी अनुप्रयोग नि: शुल्क स्विच गर्न सक्छु?
उत्तर: एप्पल र गुगलले सबै बिक्री नियन्त्रण गर्दछ र तिनीहरूले त्यसो गर्न कुनै तरिका प्रदान गर्दैन।
गुगल प्ले अनुप्रयोग स्टोर प्रश्नोत्तर
म मेरो एन्ड्रोइड ट्याबलेटमा अर्डर कसरी प्राप्त गर्न सक्दछु मेरो एन्ड्रोइड फोनमा यसलाई प्रयोग गर्नका लागि?
उत्तर: सरल, उही खाता प्रयोग गर्नुहोस् जुन तपाईले त्यसलाई Google Play मा किन्नुभयो र सफ्टवेयर पुनः फोनलोड गर्नुहोस् तपाईको फोनमा। Google ले तपाईंलाई तपाईंको पहिले नै स्वामित्वको के कोही redownload गर्न चार्ज गर्दैन।
अझै प्रश्न छ?
हामीलाई ईमेल गर्न यहाँ ट्याप गर्नुहोस्।
मूल्य आधारित देश परीक्षण मोड संयुक्त राज्य अमेरिका (युएस) को परीक्षणको लागि सक्षम भयो। तपाईंले निजी ब्राउजिंग मोडमा परीक्षणहरू गर्नुपर्नेछ। यसको साथ निजीमा ब्राउज गर्नुहोस् फायरफक्स, क्रोम र सफारी